Ukubuka Indalo yaseTuscan Ukusuka kwiCasa Gave - I-Airbnb
Ukubuka Indalo yaseTuscan Ukusuka kwiCasa Gave
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguElisa
Indlu iqulathe amagumbi amabini ngaphakathi kwephiko lendlu ye-Gave manor e-Sorana, idolophana encinci entliziyweni yeSvizzera Pesciatina eTuscany. Kude nenginginya yezixeko, yindawo elungileyo apho unokubalekela khona kwaye ufumane ukuphumla. Yithakazelise iisilingi zantlandlolo zeplanga kunye nezinto ezenziwe ngamaplanga ngelixa uhleli kwindawo yomlilo yangaphakathi okanye uchithe imvakwemini enelanga ngaphandle egadini phantsi kwepergola okanye kwidama lokuqubha elijikelezwe ngamathafa omthi womnquma.
Indlu iqulathe amagumbi amabini ngaphakathi kwephiko lendlu ye-Gave manor e-Sorana, idolophana encinci entliziyweni yeSvizzera Pesciatina eTuscany. Kude nenginginya yezixeko, yindawo elungileyo apho unokubalekela khona kwaye ufumane ukuphumla. Yithakazelise iisilingi zantlandlolo zeplanga kunye nezinto ezenziwe ngamaplanga ngelixa uhleli kwindawo yomlilo yangaphakathi okanye uchithe imvakwemini enelanga ngaphandle eg…
Ibhedi/ikhothi yomntwana esongwayo xa useluhambeni, Ibhedi ekwayisofa, Ibhedi elala abantu ababini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-Netflix, I-Smart TV, Ukubona iintaba
I-Hammock, Iindawo zokuhlala eziphandle, Indawo yokupaka ngaphakathi esimahala, Into yokoja, Ioveni yezitena, Izitulo zokugcakamela ilanga
4.96 out of 5 stars from 170 reviews
4.96 (iingxelo zokuhlola 170)
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi170
Ikhaya likwimo yendalo eneendawo ezininzi zohambo oluhle ukuze ukonwabele. Thatha uhambo oluya eLucca emangalisayo okanye kwiivineries zaseMontecarlo, okanye kulwandle lwaseVersilia, ube nosuku lwe-spa eMontecatini Terme, ndwendwela iPaki yePinocchio eCollodi, kwaye ujabulele ukutya okuyinyani kwiindawo zokutyela zasekhaya.
Umgama ukusuka ePisa International Airport
imizuzu eyi-62 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Elisa